Y - Yaw Sayardaw Bhadanta Thiraindarbiwuntha - ယောဆရာတော် (ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အလုပ်မရှိ...
ယောဆရာတော်(ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ) - အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာတရားတော်	Tags: ယောဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ - yaw sayartaw sayardaw thiraindarbiwuntha thiraindarbhiwuntha sireindarbhiwunsa thireindarbhiwontha Y - Yaw Sayardaw Bhadanta Thiraindarbiwuntha - ယောဆရာတော် (ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မေတ္တာပန်း...
ယောဆရာတော်(ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ) - မေတ္တာပန်းပွင့်ဆင်တိုင်းတင့်တရားတော်
Tags: ယောဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ - yaw sayartaw sayardaw thiraindarbiwuntha thiraindarbhiwuntha sireindarbhiwunsa thireindarbhiwontha M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကျေးဇူးတေ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် မုံလယ်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသံဝရ၏ ခန္ဓာဝန်ချခြင်း(အဂ္ဂိဈာပန)
Tags: ကျေးဇူးတော်ရှင် မုံလယ်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသံဝရ၏ ခန္ဓာဝန်ချခြင်း(အဂ္ဂိဈာပန) monlae zarpana khandarwon cha chin Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဗုဒ္ဓဘာသာလ...
Tags: မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ashinzanakaviwontha ashin janakabhivamsa mahargadayone sayartaw sayardaw Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ / High Resolution သပြေကန်...
Tags: သပြေကန် ဆရာတော် အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ thapyaykan ashin war thit htar bi won tha Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ မဟာဂန္ဓာရု...
Tags: မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ashinzanakaviwontha ashin janakabhivamsa mahargadayone sayartaw sayardaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / N - Professor Dr.Nandamalabiwuntha - ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ပါမောက္ခချ...
ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ မေတ္တာနှလုံး အစဉ်သုံး
Tags: ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ _ doctor ashin nandamarlarbiwontha Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ နောက်ဆုံး...
Tags: မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ashinzanakaviwontha ashin janakabhivamsa mahargadayone sayartaw sayardaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ အဘိဓမ္မာနှ...
Tags: မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ashinzanakaviwontha ashin janakabhivamsa mahargadayone sayartaw sayardaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဗုဒ္ဓဝင်...
ဗုဒ္ဓဝင် အမေးအဖြေ (မူလထုတ်)
Tags: မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ashinzanakaviwontha ashin janakabhivamsa mahargadayone sayartaw sayardaw Pages: 1234567 of 8